नयाँदिल्लीबाट रञ्जित रायले दिए नेपालबारे सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति... - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
नयाँदिल्लीबाट रञ्जित रायले दिए नेपालबारे सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति…
काठमाडौं, ८ वैशाख । नेपाल–भारत सम्बन्ध निकै जटिल रह्यो, जतिवेला नेपालका लागि भारतीय राजदूत थिए, रणजित राय । भूकम्पको मार खेपिरहेका नेपाली जनतामाथि भारतको नाकाबन्दी लाग्दा राय खुबै आलोचित भए । नेपालको संविधान जारी हुँदा उनले दिएका कतिपय अभिव्यक्तिप्रति नेपालीले तीतो ओकले । साढे दुईवर्षे कार्यकालमा नेपाल बसाइ उनलाई कस्तो लाग्यो ? भोगाइ कस्तो रह्यो ? नयाँपत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ।
२ भदौ ०७० देखि १७ फागुन ०७३ सम्म नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहेका उनी अहिले दिल्लीमा छन् । ६ वैशाखमा नयाँ दिल्लीको इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा भेट्दा उनले मनको कुरा सुनाए, ‘मैले भगवानसँग नेपालमा राजदूत बन्न पाऊँ भन्ने कामना गरेको थिएँ, त्यो पूरा गरेर फर्केको छु ।’
राय नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर र कठिन दुवै भएको समयमा राजदूत भए । संयोगबस भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुईपटकको नेपाल भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धको सहज समयमा भएको थियो । संविधान जारी भएसँगै सम्बन्धमा देखिनेगरी नै दरार आयो । नेपालले नाकाबन्दीको सामना गर्नुप(यो । त्यसपछि सरकार परिवर्तनका शृंखलामा भारतीय भूमिकाको चर्चा भयो । नेपालमा संविधान जारी गर्ने वेलाको राजनीतिक उतारचढावको प्रत्यक्ष साक्षी मात्र होइन, संविधान जारी भएपछि बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध र नाकाबन्दीको उनी साक्षी र स्टेकहोल्डर रहे । राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमण ९१७ वर्षपछिको राजकीय भ्रमण० उनकै कार्यकालमा भयो । यो संयोग थियो । हरेक संकटमा राजदूत रायको बाहिरी प्रस्तुति ‘कुल’ देखिन्थ्यो । उनले आवेगलाई अगाडि आउन दिएनन् । यो बीचमा आफ्ना चर्का आलोचकसँग पनि भेटे, सम्वाद कायम राखे । उनी जुनसुकै वेला नेताहरूसँग सम्वादमा रहे । भारतीय भूमिकाको कठोर आलोचना गर्ने सबैसँग उनले व्यक्तिगत रूपमा घनिष्ठता कायम गरे ।
फर्किनुअघि राजदूत रायले दूतावासस्थित आफ्नो निवास ९इन्डिया हाउस०मा समूहगत रूपमा भिजिटिङ कार्ड बाँडे र बिदाइ समारोहमा सहभागी सबैलाई भने, ‘दिल्ली आउँदा भेट्नुहोला ।’
डेढ महिनापछि दिल्लीमा उनीसँग भेट्ने मौका मिल्यो । बढिरहेको गर्मीमा भेट्दा रायको आत्मीयता र मुस्कान उत्तिकै थियो । उनले कफी सपको एउटा कुनामा लगेर मलाई सोधे, ‘नेपालमा केके हुँदै छ रु मैले भनेँ, ‘तपाईंलाई थाहै छ नि १’ राय मुस्कुराए । बरु मैले सोधेँ, ‘नेपाललाई कत्तिको मिस गरिरहनुभएको छ रु’
‘एकदमै’ रायले सुनाए, ‘धेरै प्रसंग छन्, मलाई किताब लेखुँ किजस्तो लागेको छ । हरेक प्रसंगलाई एउटा च्याप्टर बनाएर लेखेँ भने किताब बन्ला नि रु’ मैले पनि सही थापेँ । रायले किताब लेखे भने नेपाल–भारत सम्बन्धको पछिल्लो कठिन समयका भित्री पाटो उजागर हुनेछ ।
उनले नेपालीको सौहार्दता र हार्दिकता धेरै नै मिस गरेको दोहो¥याई, तेहे¥याई सुनाए । ‘नेपालका जनताको सौहार्दता र हार्दिकता म वर्णन गर्न पनि सक्दिनँ । अप्ठ्यारो र असहज परिस्थितिको बीचमा पनि म बाहिर घुमफिर गर्न जाँदा उनीहरूले देखाएको आत्मीयता र न्यानोपन म कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ,’ पूर्वराजदूत राय भन्दै गए, ‘संकट परेका वेला पनि नेपालका जनताले मप्रति दुर्भाव देखाएनन्, मैले सद्भाव मात्रै पाइरहेँ ।’ यो नाकाबन्दीको समयको सन्दर्भ थियो । मधेसीहरूले आन्दोलन गरिरहेका वेला पनि पहाडतिरबाट सम्मान पाएको उनले सम्झिरहेका छन् । जहाँ भारतविरोधी भावना उनले महसुस गरेनन् । ‘काठमाडौं उपत्यकामा केही हदसम्म पाएँ, तर काठमाडौंबाहिर पहाडमा भारतविरोधी भावना मैले पाइँन,’ रायको भनाइ छ, ‘आमरूपमा नेपालीहरूले भारतप्रति र व्यक्तिगत रूपमा मप्रति स्नेह देखाएको याद आइरहेको छ । नेपाली जनताको सहनशीलता र आत्मीयता मैले धेरै नै मिस गरिरहेको छु।’
उनले दोस्रो बुँदा तयार गरे । ‘तपाईंको देश अत्यन्तै सुन्दर छ । जनसांख्यिक विविधता छ । पहाड, हिमाल, तराईको भौगोलिक विविधता छ । यति धेरै धार्मिक स्थल छन्,’ राय अलिकति हौसिए, ‘म दिलदेखि भनिरहेको छु, नेपाल कति सुुन्दर १ भगवान्ले नेपाललाई सबैथोक दिएका छन् । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता र विविधता मैले सारै नै मिस गरिरहेको छु ।’ उनको बुझाइमा नेपाल र भारत मिलेर प्राकृतिक स्रोत र सुन्दरतालाई जनताको समृद्धिमा बदल्नुपर्छ । ‘जनताको जीवन स्तर उकास्न सकिन्छ र यसबाट उनीहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न सम्भव छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु,’ रायले औपचारिकता प्रकट गरे ।
रायले काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति र नेवारहरूको खानपान भुल्ने कुरै भएन । ‘काठमाडौं उपत्यकाको नेवारी संस्कृति साँच्चै नै अनुपम छ,’ रायले भनिरहे, ‘उनीहरूको खानपान, भाषा, लिपीजस्तो संसारमा अन्त कतै छैन । त्योे विशिष्ट संस्कृति र संस्कार मैले नजिकबाट देख्न पाएँ । उनीहरूले नै जोगाएको ६० वटा विश्वसम्पदा स्थल म कसरी भुल्न सक्छु रु’ उनले दिल्ली आएर नेवारी संस्कृति सारै नै ‘मिस’ गरेको सुनाए ।
अरूजस्तै नेपालका सबै शीर्ष नेता र नीतिनिर्मातासँग प्रत्यक्ष निकट सम्पर्कमा रहेर काम गरेका रायले नेपालका धेरै जिल्ला घुमफिर गरे, नेपालीहरूसँग नजिकबाट अन्तक्र्रिया गरे । ‘मैले औसत नेपालीले भन्दा धेरै नेपाल घुमेको छु, नजिकबाट देखेको छु,’ रायले भने । मधेसप्रति स्वभाविक रूपमा उनको लगाव बढी थियो, तर उनी हरतप्कामा पुगे, अन्तक्र्रिया गरे । त्यही कारणले हुन सक्छ, उनको बिदाइ सम्भवतः अन्य भारतीय राजदूतको तुलनामा लामै भयो।
उनले व्यक्तिगत तहबाट आयोजना गरिएका हाइ प्रोफाइलबाहेकको बिदाइमा सहभागिता जनाएनन्, तर उनको बिदाइमा आयोजित संस्थागत कार्यक्रममा प्रायः सहभागी भए । जनकपुरको जानकी मन्दिरपरिसरमा ठूलो भीडले उनलाई बिदाइ गर्यो, काठमाडौंमा पनि सौहार्द नै रह्यो।
कुराकानीको उत्तराद्र्धमा रायले यो भन्न भुलेनन्, ‘हरेक देशका आफ्नै आधारभूत र मौलिक समस्या हुन्छन्, ती आफ्नै प्रकारले समाधान हुँदै जान्छन् । मैले नेपालको उज्ज्वल भविष्य देखिरहेको छु । नेपालका सबैखाले कठिनाइ र समस्याको समाधान जरुर हुनेछ । म अत्यन्तै आशावादी र सकारात्मक छु ।’ कुराकानीको बिट मार्नै लाग्दा उनले यो पनि सुनाए, ‘सुन्नुस्, नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्यका लागि म हरहमेसा प्रार्थना गरिरहनेछु।’